Fandefasana fiarabe fitaterana ho an'ny fampakaram-bady any Madrid ✅ ohatrinona ny vidiny? ✅ Fandefasana fiarabe fitaterana ho an'ny fampakaram-bady any Madrid ✅ ohatrinona ny vidiny? ✅
Fanolorana fiara fitaterana ho an'ny fampakaram-bady ao Madrid - Torres Bus
Famandrihana bisy ho an'ny fampakaram-bady ao Madrid
Ao amin'ny orinasa Torres Bus dia manolotra ny mpanjifanay ny tolotra tsara indrindra amin'ny hatsaran-toetra sy ny vidiny; ny Famandrihana bisy ho an'ny fampakaram-bady ao Madrid Io no iray amin'ireo tolotra tianay indrindra; Hatramin'io andro manokana io, te-handeha miaraka aminao sy ireo vahiny tsara sitra-po ianao.
Saingy matetika dia misy fanontaniana sy fisalasalana alohan'ny hiantohana amin'ny orinasa satria; Ny tadiavinao dia ny zavatra rehetra hivoaka amin'ny vavanao.
Tena nisy: Lorena sy Jose nihaona 10 taona lasa izay, ary mieritreritra ny handeha hankalaza ny toerana tena toeram-pisakafoanana, Jose ahazoany ny fotoana mba mangataka azy ho vady Lorraine ary mazava ho azy, hoy Lorena eny, ary manomboka mahazo matahotahotra, fotsiny taona iray sisa ny fampakaram-bady sy ny maro ny fanomanana ny andro lehibe, tonga ny fotoana mba handamina ny famindrana vahiny amin'ny bus.
manofa bisy ho an'ny fampakaram-bady
Fanofana mpanazatra ho an'ny fampakaram-bady ao Madrid
Lorena sy Jose, mangataha a teti-bola la fiara fitaterana bus y minibuses Towers bus ary milaza aminao izy ireo fa misy ny angona tena manan-danja izay tsy maintsy anomezany anjara, mba hanaovana izany budget budget, ny datin'ny fampakaram-bady, izay handraisana ny lanonana, inona no tokony hatao mandefitra ny vahiny amin'ny mpanazatra ho an'ny vahoaka, aorian'ny Boda izay misy ny fanasana sy ny tena zava-dehibe hitranga, rehefa mihazona ny fotoana izay tsy maintsy manao ny lalana miverina, izay dia ny mamela ny vahiny sy ny ara-pahasalamana ao an-trano ny feo, dia Ho iray hanao am-pofoany raha tsy izany isika dia hanana ora maro indray, moa ve isika mahalala hoe olona firy no hijanona hatramin'ny farany? ny seza ampy amin'ny mpanazatra sy ny minibuses ary tsy hahafoy na iza na iza eny an-kianja.
La bus Torres Bus, dia hanoro anao amin'ny alàlan'ny fikarakarana ny lalana tsara indrindra sy ny fanoroan-kevitra izay fomba tsara indrindra hanatsarana ny loharanom-pitaovana, ka ny serivisy fitaterana vahiny Miezaha ho ara-toekarena sy mahomby araka izay tratra, ho an'ny mpivady.
fanolorana bus an'ny budget, ho an'ny fampakaram-bady ao Madrid
Ny ampitso, amin'ny latsaky ny 24 ora, Lorena sy Jose, dia mandray amin'ny mailaka, ny bola amin'ny vidiny mora. Raha vantany vao ekena ny vidiny, dia tsy hiraharaha ny zava-drehetra izy ireo, mandra-pahatongan'ny andro maromaro mialoha ny fampakaram-bady bus Torres Bus, dia hifanerasera amin'izy ireo mba hanao famerenana vaovao momba ny famandrihana ary hanangona ny vaovao sy ny fanovana nataonao nandritra ny fotoana.
Ny herinandro alohan'ny fampakaram-bady, dia hahazo tatitra miaraka amin'ny vaovao momba anao ianao famandrihana bisy ary miaraka amin'ny fampahalalam-baovao rehetra, dia tsy maintsy hamerina hijery i Lorena sy Jose, mba hifehy amin'ny antsipiriany rehetra ny ekipa Bus Bus Coaches, mandeha miasa ary mamorona ny ampahany amin'ny asa, ho an'ireo mpamily izay hanatanteraka ny Wedding service ary izy ireo dia ho dika mitovy amin'ny angon-drakitra nomen'i Lorena sy Jose.
Ny mpamily ny bisy ho an'ny fampakaram-bady, Sipa na ny fiara fitateram-bahoaka mpitantana dia hahazo mailaka na ny SMS, mba hilaza aminao ny anarany sy ny nomeraon-telefaoniny, izay ho mpamily voatendry ny famandrihana, raha Jose Lorena sy mandany ny andro farany ny tokan-tena.
En Bus coach coaches, vita ny asa mba hahatanteraka ny zava-drehetra, ny filohan'ny Traffic Traffic dia mihaona amin'ireo mpamily voatendry ho an'ny fampakaram-bady, hamerenana ny famandrihana ary tsy misy fisalasalana momba izany.
mamarana ny famandrihana bus amin'ny fampakaram-bady
Tonga ny andro lehibe, dia tony i Lorena sy Jose, satria fantany fa tsy mila miahiahy azy ireo izy famindrana ny vahiny ao amin'ny fampakaram-bady, satria nanakarama vondron'olona matihanina izy ireo, niantoka fa ny zava-drehetra dia mandeha araka ny tokony ho izy ary vonona ny hiasa haingana eo anatrehan'ny tarehin-javatra rehetra.
Ny lehiben'ny fifamoivoizana fiara fitaterana bus, noho ny fandaminana ny mpanazatra sy minibus, dia hahafantatra fa ny lalana sy ny fandaharam-potoana dia tanteraka tanteraka.
Lorena sy Jose, dia nanangona ny fianakaviany sy ireo namany, ary mahafantatra fa ho tonga ara-potoana hizarana amin'izy ireo izany andro manan-danja izany, amin'ny faran'ny andro, ny fiara fitaterana bus Torres Bus, hitondra anao any an-trano sy feo aho.
Noho izany antony izany dia manoro hevitra anao izahay ary manolotra fanontaniana maromaro efa napetraky ny mpanjifanay.
Mangataha fampisehoana amin'ny whatsapp
Raha te-hangataka fehezanteny amin'ny whatsapp ianao, ankehitriny dia mora kokoa noho ny hatramin'izay. Ampiasao fotsiny ireo saha entina manomboka ary manome azy ny mandefa. Tsy mila manoratra ny lahatony ianao. Mora tokoa izany raha amin'ny alalan'ny fanomezana ny bokotra efa navotsotra avy hatrany amin'ny chat an'ny orinasa.
Raha tianao, dia manana fomba fanao nentim-paharazana koa isika, mameno ny endrika amin'ny saha ary mamaritra ny toerana fanangonana sy toerana. Azonao atao ny mameno ny saran-dalana momba ny fizahantany izay ahafahanao maneho amin'ny antsipiriany ny fiatoana tsirairay.
Fiara fitaterana bus na minibus amin'ny mariaziko?
Voalohany indrindra, ity dia iray amin'ireo fanontaniana an'arivony; fa ny mpanjifantsika dia manao mandrakariva amintsika ary manao ny tenany izy ireo amin'ny fotoana fanofana karazana fiara rehetra; satria, araka ny efa navoakanay teo aloha; Andro manan-danja eo amin'ny fiainantsika izany, ny firaisana amin'ny fanambadiana.
Ho an'ny fifidianana anao; Ao amin'ny orinasa misy antsika dia manana modely sy fahaiza-manao samihafa izay miala ny seza 12 mankany amin'ny seza 71. Ny fanomezana ny mpanjifa ny safidy ny afaka mampifandray ny fiara ho azy ireo.
Ireo mpamily izay manana traikefa sy fiara tsara?
Ny mpamily rehetra; Manana fanamiana mifanaraka aminy izy ireo mba hanatontosa ny serivisy amin'ny fomba izay ahafahan'izy ireo mahazo aina.
Mifanohitra amin'izany, ny tsirairay amin'ireo mpamily antsika dia manana fahaizana matihanina mba hampivelatra ny serivisy. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia nodidiana tamin'ny alalan'ny fanaraha-maso henjana alohan'ny hividianana azy.
Afaka misafidy ny lalana amin'ny fiara fitateram-bahoaka ve aho?
Mazava ho azy fa ny asa rehetra ataontsika dia à la carte; raha maniry hiala amin'ny toerana iray ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao Madrid ny mpanjifa; Ho an'ny teboka hafa toy ny: Toledo, Guadalajara, Avila, dia tsy maintsy milaza amintsika ny karazana serivisy; satria fanazavana tsara amin'ny fotoana fangatahana ny tetibola; Azonao atao ny manitsy ny vidiny ary manolotra tanana mihitsy aza rehefa mandamina ny diany ho ohatra amin'ity teti-bola ity:
Hello good afternoon, Azucena ny anarako ary tiako ny fanompoana; satria amin'ny volana manaraka dia manana fifandraisana amin'ny fanambadiana aho ary tiako ho fantatra; Manoro ahy izy ireo hitondra ny fianakaviako; Manodidina ny 14 sy ny mpandeha 59 eo ho eo izy ireo. Ny toerana fanangonana dia ao amin'ny Plaza Castilla sy Atocha, ny fampakaram-bady dia ao Almudena sy ny fanasana ao anaty toeram-piompiana manakaiky an'i Illescas.
Aorian'izay dia hamaly anao ny mpivarotra. Manana fampakaram-bady araka ny mahazatra ary mamela ny zava-drehetra mafy; Ny komity ara-barotra dia nanoro ity mpanjifany ity, mba hahazoana antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra ary tsy misy ny fihenana:
valim-panontaniana momba ny fampindramana mpanazatra ho an'ny fampakaram-bady ao Madrid
Hello Good afternoon, Azucena, voalohany indrindra dia manoro seza mikrobasan'ny 16 ho an'ny fianakavianareo.
Ho an'ny fitaterana ireo vahiny, manoro hevitra anao izahay hametraka bisy 2 an'ny seza 39; amin'ny tranga izay tao amin'ny plaza castilla 30 no nanasa vahiny sy tao atocha 29. Etsy ankilany, raha fantatrao ny vahiny izay handeha any amin'ny toerana tsirairay avy; dia afaka manova ny fahafaha-manao mba hanatsarana kokoa ny teti-bola.
Raha tsy izany dia ananantsika ny mety amin'ny fanangonana ireo vahiny voalohany ao amin'ny Plaza Castilla ary avy eo maka ireo olona ao Atocha; Amin'ity aho dia mila bisy seza 64 fotsiny.
Inona no vidin'ny fananana bisy fampakaram-bady ho an'ny fampakaram-bady?
Na dia mitovy aza ny asan'ny serivisy; Misy zavatra tsy mitovy foana amin'ny Fiara fitaterana bus amin'ny fampakaram-bady Madrid. Ny fampakaram-bady dia mety ho feno ary mitaky fiarabe fitaterana maro be, na angamba fampakaram-bady akaiky izay ahitana olona vitsivitsy no asaina ary ny serivisy dia afaka rakotra amin'ny iray na maromaro microbus.
Mba hahafantarana fa samy hafa sy manokana ny fety tsirairay; dia nitarika ho amin'ny famaranana ny orinasa; Io famaranana io dia nalaina avy amin'ny karazana tolotra samihafa. Izany no antony; raha mitady vaovao momba ny fandefasana bus; Ny tarehimarika dia zara raha miseho mialoha na mihidy mialoha.
Mpanafatra entana ho an'ny fampakaram-bady any Madrid
Ilaina ny mifandray amin'ny orinasa ary manazava ny mampiavaka ny tranga; mba hahafahantsika manome teti-bola.
amin'ny ankapobeny; ny fanompoana Fandefasana bus any Madrid; Ho an'ity karazana hetsika ity, dia omena ora vitsivitsy izany; Noho izany, ireo mpandeha nentina nandalo ity rafitra ity dia tsy mitaky vola be loatra; ka niteraka safidy malaza sy azo ampiharina.
Fa mazava anefa fa tsy ny tranga rehetra no mitovy, noho izany dia andrasana fa misy vidiny samihafa, raha tadiavin'ny teti-bola avy amin'ny orinasa isan-karazany, miaraka amin'ireo fepetra samihafa.
Tao Torres Bus izahay no niasa ity tsena ity nandritra ny fotoana fohy, ary ireo izay mitodika aminay, dia nahita toetra manan-danja hatrany amin'ny fanompoanay mividy fiara fitaterana ho an'ny fampakaram-bady miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Birao hirehitra amin'ny vidin'ny fampakaram-bady
Fanolorana fiara fitaterana ho an'ny fampakaram-bady ao Madrid - Torres Bus Desambra 3rd, 2018Fampiofanana mpampiofana